प्रश्न/उत्तर| Ujyaalo Online:: Nepal News, Nepali Samachaar
प्रश्नः अहिले सरकारले श्रम स्वीकृति रोकेको खबर सुने । इपिएसबाट कोरिया गएको र बिदामा फर्किएकाले जान पाउछन् कि पाउदैनन् । कोरियाको हकमा भने पहिले नै पाँच वर्षको श्रम स्वीकृति दिइएको हुन्छ । यस्तो अवस्थामा म जाँन पाउँछु कि पाउँदिन होला ?
उत्तरः राजकुमार जी, हामीले तपाईँको जिज्ञासा, इपिएस कोरिया शाखाका बाबुराम घिमिरेसँग सोेधेका थियौं । उहाँका अनुसार, तपाईँको श्रम अवधि छ र भिसा कार्ड पनि छ भने तपाईँ अहिले जान पाउनुहुन्छ । तर श्रम सक्किएर फर्किएको हो र पुनः श्रम स्वीकृति लिनु पर्ने भएमा मात्र हो नपाउने । त्यसैले तपाईँको जिज्ञासा अनुसार, तपाईँ कोरिया फर्किन पाउने कोरिया शाखाका घिमिरेले बताउनुभएको छ ।
सकिल मोहम्मद मुसलमान / कतार
प्रश्नः मैले कतारको मर्करी मीना कम्पनीबाट ३३ जनाको बाँकी तलब आएको खबर सुने । तर मेरो आएको छैन । म पनि त्यही कम्पनीको पीडित हुँ । मेरो बाँकी तलब किन आएन ? मैले बाँकी तलब कसरी पाउछु होला ?
उत्तरः सकिल जी, हामीले तपाईँको प्रश्नको जवाफ, कतारमा रहेको नेपाली दूतावास, वैदेशिक रोजगार विभाग र एम्नेष्टी इन्टरनेशनल नेपालबाट ल्याएको छौं । एम्नेष्टी इन्टरनेशनलले वैदेशिक रोजगार विभागमा पीडितका पक्षबाट उजुरी दिने बेला तपाईँसँग सम्पर्क नभएकाले तपाईँको उजुरी नै विभागमा परेन । त्यही कारणले तपाईँको पैसा नआएको हो । त्यसैले अब तपाईँसहित जति पनि मर्करी मीना कम्पनीबाट तलब लिन बाँकी हुनुहुन्छ उहाँहरुले फेरि निवेदन दिन सक्नुहुन्छ । नेपालमा हुनेले वैदेशिक रोजगार विभागमा, ...
मानबहादुर बलायर / कुवेत
प्रश्नः म कुवेतबाट फर्केर स्वदेशमै आफ्नो गाउँठाउँमा केही उद्यम गर्न चाहन्छु । तर बजार व्यवस्थापनबारे मैले केही सोच्न सकेको छैन । यदि मेरो व्यवसायले उत्पादित सामानको बजार पाएन वा घाटामा गयो भने सरकारले क्षतिपूर्ति दिन्छ कि दिंदैन ? के छ सरकारको नीति ?
उत्तरः मानबहादुर जी, सरकारले अहिले तपाईँले गर्ने व्यवसायको बजार व्यवस्थापनको जिम्मेवारी तोकेर लिदैन । तर विदेशबाट फर्केर स्वदेशमै व्यवासाय गर्न चाहने युवाहरुलाई विभिन्न तरिकाले सहयोग गर्दै आएको छ । वैदेशिक रोजागारीबाट फर्केकाहरुलाई आफूले सिकेको सीपको स्वदेशमै सदुपयोग गर्न प्रोत्साहन गर्ने गरेको छ । विदेशमा सिकेको सीपको निःशुल्क प्रमाणिकरण गर्ने र निःशुल्क सीपमुलक तालिम सिकाउने गरेको छ । त्यसमा सहभागी भएर तपाईँले व्यवसायजन्य ज्ञान सिक्न सक्नुहुन्छ । तर उत्पादित वस्तुको सु...
जागेश्वर बुढा / युएई
प्रश्नः नेपालबाट मलाई राम्रो काम छ भनेर पठायो । तर यहाँ कम्पनीमा सिस्टम नै छैन । तलब समयमा दिँदैन, सानो सनो गल्तीमा पनि तलब काट्ने, सजाय दिने गर्छ । ११ सय दिर्हाम तलब त जरिवाना तिर्दै सकिन्छ । म दुबईको पावर ग्रुप कम्पनीमा कोही पनि नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीलाई नआउन सुझाव दिन्छु ।
उत्तरः जागेश्वर जी, तपाईँ आफ्नो समस्या यूएईमा रहेको नेपाली दूतावासमा राख्नुहोस् । दूतावासबाट समास्या समाधानका लागि समन्वय हुन्छ भन्ने हामीले आशा गरेका छौँ । त्यसका लागि आबुधाबीमा रहेको नेपाली दूतावासमा +9712634 4767, +9712634 4385 नम्बरमा सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ ।
प्रश्नः म अहिले रोजगारीको लागि कुवेतमा छु। यहाँ आएको झण्डै दुई वर्ष भयो। म हाल कुवेतमा रोजगारीको सिलसिलामा आएको करिब दुई वर्ष भो। मेरो समस्या, म श्रम स्वीकृति नलिई भारतको बाटो हुँदै यहाँ आएको हुँ। अब म कि पाउदीन होला ?
उत्तरः सञ्जु जी, सबैभन्दा पहिला त श्रम स्वीकृति नलिई कुनै पनि देशमा काम गर्न हुँदैन । जोखिम धेरै हुन्छ । यदि तपाईं घरेलु श्रमिकको रुपमा नेपालबाट श्रम स्वीकृति नलिएर कुवेत जानुभएको हो भने, तपाईंले श्रम स्वीकृति पाउनुहुन्न । तर यदि कम्पनीमा काम गर्न जानुभएको हो भने श्रम स्वीकृति पाइन्छ । तर त्यसको लागि तपाईँले त्यहाँको सीभिल आईडी, आफूले काम गरिरहेको कम्पनीसँगको करार सम्झौता र काम गरेका कागजातहरु श्रम कार्यालयमा पेश गर्नुपर्ने हुन्छ । नेपालबाट तपाईँले काम गरिरहेको कम्पनीमा ...
प्रश्नः मैले युएईमा सेक्युरिटी गार्डको अन्तरवार्ता पास गरेर मेडिकल, डकुमेन्ट, फोटो सबै म्यानपावरलाई बुझाए । अहिले म्यानपावरले एम ओ एल सर्टिफिकेट निकाल्नलाई एक लाख रूपैँया जम्मा गर्न भनेको छ । त्यो पैसा नदिईकन भिसा नआउने कुरा गर्छ । के त्यसको लागि पैसा डिपोजिट गर्नुपर्छ ?
उत्तरः दिनेश जी, नेपाल र यूएईबीच भएको श्रम समझदारी अनुसार कुनै पनि काममा शून्य लागतमा यूएई जान पाइन्छ । म्यानपावरलाई पैसा तिर्न पर्दैन । यदी तपाईँसँग पैसा मागिरहेको छ भने यो ठगी हो । त्यसैले तपाईँले काठमाण्डैको बुद्धनगरमा रहेको वैदेशिक रोजगार विभागमा सूचना दिनुहोस् । विभागले यस्ता म्यानपावर कम्पनीलाई कारबाही गर्छ ।
प्रश्नः मेरो श्रम स्वीकृतिको अवधि ६ महिनाको छ । म विदेश जान मिल्छ कि मिल्दैन होला ।
उत्तरः मन लामा जी, तपाईँ पहिलेकै कम्पनीमा जान लाग्नुभएको हो कि नयाँ भने खुलाउनु भएको छैन । हामीले तपाईँको जिज्ञाशा श्रम कार्यालय ताहचलका निर्देशक सुरेश जोशीसँग राखेका थियौं । उहाँका अनुसार, तपाईँ पहिलेकै कम्पनीमा जान लाग्नुभएको हो भने जान मिल्छ । पहिलेकै कम्पनीमा जान कम्तीमा तीन महिनाको श्रम अवधि हुन्दा जान पाइन्छ । तर अर्को कम्पनीमा जाने हो भने जति नै अवधि बाँकी भए पनि नयाँ श्रम स्वीकृति लिन पर्छ ।
प्रश्नः सोध्नुहुन्छ, मेरोे दाइ मलेसिया आउन लाग्नु भएको छ तर पासपोर्टको म्याद १६ महिनाको छ । के अहिले नयाँ पासपोर्ट बनाउन मिल्छ होला ? यता आएपछि दुईवर्षसम्म फर्किंन मिल्दैन । के गर्दा उपयुक्त होला ?
उत्तरः घनश्याम जी, हामीले तपाईँको जिज्ञासा राहदानी विभागका नायवसुब्बा विपिन चन्द समक्ष राखेको थियौं । उहाँका अनुसार, यदि तपाईँको दाइ नेपालबाट मलेसिया जाँदै हुनुहुन्छ भने सर्वप्रथम त पासपोर्टको म्याद दुई वर्षको हुनैपर्छ । यदि पासपोर्टको म्याद दुई वर्ष बाँकी छैन भने मलेसिया जानका लागि श्रम कार्यालयबाट श्रम स्वीकृति नै पाइदैन । यस्तो अवस्थामा नयाँ पासपोर्ट लिन पाइन्छ । राहदानी विभागमा १० हजार रुपैयाँ तिरेर एक दिनमै नयाँ पासपोर्ट नविकरण गर्न सकिन्छ भने् त्यो भन्दा सस्तो शुल्कमा ...
तिलक नारायण / यूएई
प्रश्नः म १० वर्षदेखि यूएईमा काम गरिरहेको छु । तर ९ महिनाअघि विशेष कारणले मलाई कम्पनीले निकालिदियो । अहिले अर्को कम्पनीमा काम गरिरहेको छु । अब नेपाल आउदा श्रम स्वीकृति लिनपर्छ । किनकी यो कम्पनीमा मैले श्रम स्वीकृति लिएको छैन । त्यसैले अब यो कम्पनीका लागि श्रम स्वीकृति लिन मैले के के कागजात पेश गर्नपर्छ ?
उत्तरः तिलक नारायण जी, हामीले तपाईंको प्रश्नको उत्तर श्रम कार्यालय ताहाचलका निर्देशक सुरेश जोशीबाट ल्याएका छौं । तपाईँले कम्पनीले के कारणले कामबाट निकालेको हो भनेर खुलाउनुभएको छैन् । र तपाईँ अहिले गैरकानुनी रुपमा काम गरिरहेको हो या कानुनी रुपमा भन्ने पनि प्रष्ट छैन । तर यदी तपाईँले कानुन विपरित कुनै काम गर्नुभएको छैन र कम्पनीले कुनै रोक लागएको छैन भने नेपाल आउँदा अर्को कम्पनीमा जानका लागि सजिलै श्रम स्वीकृति लिन पाइन्छ । त्यसका लागि पहिलेको श्रम स्टीकर टाँसिएको पासप...
प्रश्नः मेरो लट नम्बर २२४६८५ हो। यूएई जान कति समय लाग्छ होला। सबै लगानी कम्पनीले दिन्छ कि दिँदैन ? उडान कहिले हुन्छ ?
उत्तरः कपिल जी, नेपाल र यूएईबीच भएको समझदारी अनुसार यूएई जान लाग्ने सबै रकम रोजगारदाता कम्पनीले दिन्छन्। तपाईँले भिसा, टिकट लगायत कुनै पनि बहानामा पैसा तिर्न पर्दैन। तर कल्याणबारी कोष र बिमा गरे बापत लाग्ने रकम भने तिर्न छ। तपाईँले पठाउनुभएको लट नम्बरको आधारमा खोज्दा यूएईको अल मनसोर इन्टरप्राइजेज एलएलसी कम्पनीमा मेसन, कार्पेन्टर लागयतको काममा कामदारको माग छ। यो कम्पनीमा पठाउनका लागि आयुष इन्टरनेशनल ओभरसिज् सर्भिसेजले पूर्व स्वीकृति लिएको छ। तपाईँ कुन काममा जान थाल्नु...
कर्णबहादुर रावल / साउदी
प्रश्नः मेरो घर अछाम हो। म साउदी अरेविया आएको पाँच महिना भयो। तर अहिलेसम्म पनि काम पाएको छैन।
उत्तरः कर्णबहादुर जी, सबैभन्दा पहिला तपाईँले म्यानपावर कम्पनीसँग आफूले काम नपाउनुको कारण बुझ्नुहोस्। म्यानपावरले भनेको कुरा तपाईँलाई चित्त बुझेन भने साउदी अरेवियामा रहेको नेपाली दूतावासमा आफ्नो समस्या राख्नुहोस्। ०५०००५६५२९ नम्बरमा साउदीका लागि श्रम काउन्सीलर अम्बिका अधिकारीलाई सम्पर्क गर्नुहोस्। उहाँले तपाईँको समस्या समाधानका लागि सहजिकरण गर्नुहुनेछ।
प्रश्न: मलेसियाबाट करार अवधि सकेर घर फर्केको कति महिना पछि फेरि जान मिल्छ होला ?
उत्तर: लोकमनी जी, मलेसियाबाट तपाईँ फर्किदा कसरी फर्किनुभएको छ त्यसमा भर पर्छ । तपाईँ फर्किंदा करार अवधि सक्काएर ‘चेक आउट मेमे’ लिएर फर्किएको हो भने फेरि अर्को प्रक्रिया गरेर जान मिल्छ । कहिलेकाही भने फर्किंनेबेला निश्चित समयसम्म फेरि फर्किन नमिल्ने भनेर तोकिएको हुन्छ । तर त्यसका लागि त्यहाँ नियम उल्ङघन गरेको वा कुनै कारबाहीमा परेको अवस्थामा मात्रै त्यस्तो हुन्छ । नत्र सामान्य अवस्थामा तपाईँ नेपाल फर्किएर जहिले जान चाहे पनि मिल्छ ।
राहुल कुमार राउत
प्रश्नः फ्रि भिसा, फ्रि टिकटको नियम छ तर पनि एजेण्टले धेरै पैसा खान्छन् । यसबाट बच्न के गर्ने र कहाँ सम्पर्क राख्ने ? कसरी प्रक्रिया अघि बढाउदा ठगीमा परिदैन ?
उत्तरः राहुल जी, खाडीका देश र मलेसिया जानेका लागि सरकारले फ्री भिसा फ्री टिकटको नियम लागू गरेको छ । तर यसको कार्यान्वयन फितलो छ । एजेण्ट र म्यानपावरले मनलाग्दी पैसा लिइरहेका हुन्छन् । तर एजेण्ट र म्यानपावरलाई पैसा बुझाउने पनि हामी नै त हौं । त्यसैले म्यानपावरले माग्यो भन्दैमा जति माग्छ त्यती पैसा दिन हुँदैन । अझ मलेसियाको हकमा त शुन्य लागतमा जान पाइने भएको छ । स्वास्थ्य परीक्षण लगायतको खर्च पनि रोजगारदाता कम्पनीले नै दिने सहमती भएको छ । त्यसैले, तपाईँ विदेश जाने हो भने...
बिष्णु बहादुर दर्लामी
प्रश्नः मैले यूएईमा काम गरेको ९ वर्ष भयो । म यहाँ रेस्टुराँमा काम गर्छु । मसँग चाइनीज परिकार बनाउने सीप छ । मैले नेपालमा आएर रेस्टुराँ खोलेभने केही अनुदान पाउछुकी पाउदिन् । पाउँछु भने कहाँ सम्पर्क गर्ने होला ?
उत्तरः विष्णु बहादुर जी, अहिले सरकारले विदेशबाट फर्किएर स्वदेशमा केही गर्नेहरुलाई प्राथमिकतामा राखेर काम गरिरहेको छ । तपाईँ पनि स्वदेश फर्किएर काम गर्छु भन्ने सोच बनाउनुभएको रहेछ त्यो राम्रो हो । अहिले सरकारले विदेशबाट फर्किएर स्वदेशमा व्यवसाय गर्नेलाई अनुदान भन्दा पनि सहुलियतमा ऋण दिएको छ । नेपाल सरकारका विभिन्न निकायबाट अनुदान रकम पनि पाइन्छ । ऋण पाउने प्रक्रिया र अन्य जानकारीका लागि नेपाल सरकार, श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयमा स्थापना भएको कल सेन्टरमा फोन ...
प्रश्नः मलेसियामा अवैधानिक हुनेलाई सरकारले फर्किने मौका दिएको छ भन्ने सुनेको छु । यो मौकामा कसरी घर फर्किन सकिन्छ ? के के प्रक्रिया गर्न सकिन्छ बताइदिनुस् न ?
उत्तरः रामनारायण जी, मलेसियाले विभिन्न कारणले अवैधानिक भएका नेपालीसहित विदेशी नागरिकलाई अगस्ट १ देखि आउँदो डिसेम्बर ३१ तारिखसम्मको लागि आममाफीको समय दिइएको हो । मलेसिया सरकारले ल्याएको ‘ब्याक फर गूड’ कार्यक्रममार्फत अवैधानिक रुपमा बसेका सबै विदेशी नागरिक यसमा समावेश भएर स्वदेश फर्किन पाउनेछन् । भिसा र पासपोर्टको म्याद सकिएर अवैधानिक रुपमा मलेसियामा बसिरहेका सबैले यो समयमा स्वदेश फर्किन सक्नेछन् । यो प्रक्रियामा सहभागी हुन तपाईँले सबैभन्दा पहिला त मले...
प्रश्नः मैले यूएईको भिसा अनलाइनमा चेक गर्दा एक्टिभ भएको देखाउँछ । भिसाको अवस्था, इस्यू डेट, भिसा सकिने अवधि पनि देखाउछ । तर म्यानपावरले भिसा आएको छैन भन्छ । भिसा आएर पनि म्यानपावरले रोक्ने मनसाय बनाएको भए त्यो भिसामा यूएई जाने अरु कानुनी बाटो हुन्छ कि हुँदैन ? भिसा आउँदा पनि म्यानपावरले मन लागे पठाउने मन नलागे नपठाउने गर्न पाउने अधिकार हुन्छ र ?
उत्तरः सबिन जी, तपाईँको भिसा एक्टिभ देखाएपछि म्यानपावरले त्यसरी ढाँट्न नपर्ने हो । म्यानपावरको मनसाय बुझ्न गाह्रो छ । म्यानपावरले नै डिमाण्ड ल्याएर त्यसै अनुसार कामदार पठाउने हुँदा जाने बाटो अर्को हुँदैन । तर कानुन अनुसार कोही पनि कामदारको पासपोर्ट लिएर सबै प्रक्रिया गरेपछि म्यानपावरले पठाउदिन भन्न पाउँदैन । अनि म्यानपावरलाई जे मन लाग्यो त्यही गर्न सरकारले छुट दिएको पनि छैन । त्यसैले भिसा आउँदा आउँदै पनि उसले भिसा आएको छैन भन्न मिल्दैन । तपाईँले काठमाण्डौको बुद्...
प्रश्नः पहिलपल्ट यूएई जादैछुँ । सुरक्षा गार्डमा मेरो भिसा दुई महिनाको थियो । भिसा सेम्टेम्बर १२ सम्म मात्र छ । म्यानपावरले मलाई सेम्टेम्बर १० मा यूएईको फ्लाइट गराउदैछ । यसरी यूएई भिसा सकिन जम्मा २ दिन अधि मात्र पुग्दा मलाई समस्या त हुदैन ? पहिलोपल्ट यूएई जादा भिसा सकिन कति दिन अधि गइसक्नु पर्छ ?
उत्तरः सुरेन्द्र जी, भिसाको अवधि बाँकी हुन दुई दिनअघि यूएई पुग्दा पनि कुनै समस्या हुँदैन । किनभने पहिलोपटक यएई जाँदै हुनुहुन्छ भने तपाईँसँग भएको त्यो पेपर भिसा हो । त्यसमा अवधि भन्ने हुँदैन । त्यसमा दुई महिना लेखेको हुन्छ । त्यसको अर्थ तपाईँ दुई महिना भित्र यूएई प्रवेश गरिसक्नुपर्छ । अनि गन्तव्य देशमा पुगेपछि चाहिँ पासपोर्टमा भिसा लाग्न सुरु हुन्छ । पेपरमा एक दिन मात्र भिसा बाँकी छ भने पनि सहज रुपमा प्रवेश गर्न पाइन्छ ।
प्रश्न: सन् २००९ मा साउदी जाँदा मेरो पासपोर्ट नम्बर अर्कै थियो । किनकी त्यो बेला एमआरपी पासपोर्ट आएकै थिएन । तर अहिले एमआरपी बनाउँदा पासापोर्ट नम्बर अर्कै छ । र म फेरि साउदी जाँदै छु । पासपोर्ट नम्बर फरक पर्दा समस्या हुन्छ कि हुँदैन होला ?
उत्तर: हिमा जी, नयाँ पासपोर्ट लिँदा नयाँ नम्बर आए पनि यसले यात्रा गर्दा कुनै समस्या पर्दैन । तपाईँको पूरानो पासपोर्टकै आधारमा एएआरपी पासपोर्ट बन्ने हो । एमआरपी पासपोर्ट बन्दा नयाँ सिरियल नम्बरको आधारमा तपाईँको पासपोर्ट नम्बर पनि तय हुन्छ । तपाईँले नयाँ नम्बर पाएपछि पुरानो नम्बरको कुनै अर्थ पनि हुँदैन । त्यसैले तपाईँ पहिले साउदी जाँदा हस्तलिखित पासपोर्टमा भएको नम्बर र अहिले एमआरपीमा भएको फरक नम्बरले कुनै समस्या पर्दैन ।
प्रश्न: म कोरियन जान चाहन्छु । तर मलाई केही थाहा छैन । कहाँ जाने ? के के प्रक्रिया हुन्छ र कुन कुन काम गर्नपर्छ ? खर्च कति लाग्छ बताइदिनुस् न ?
उत्तर: अनु जी, कोरिया जानका लागि भाषा र सीप परीक्षामा परीक्षा पास हुनुपर्छ । भाषा र सीप परीक्षामा पास भएपछि कोरियाको लागि रोजगार आवेदन फारम भर्न पाइन्छ । नेपाल सरकारले ईपीएस प्रणालीबाट कोरियामा नेपालीलाई पठाउनका लागि आवेदन माग गर्छ । त्यही बेला आवेदन दिन पर्छ । आवेदन दिएको केही महिनापछि भाषा परीक्षा हुन्छ । भाषा परीक्षामा पास हुनेले सीप परीक्षा दिन पाउँछन् । सीप परिक्षणमा पनि उत्र्तिण भएमा कोरियाको रोजगारीको लागि आवेदन फारम भर्न पाइन्छ । यदी कोरियबाट करार सम्झौताको...
प्रश्न: विदेशमा गरिने स्काफफोल्डिङको काम कस्तो काम हो ? के के गर्न पर्छ । र सीप सिक्न कहाँ पाइन्छ बताइदिनुस् न ?
उत्तर: पर्वत जी, स्काफफोल्डिङको काम भनेको खट बाध्ने काम हो । यो काममा जाँदा जस्तैः घर बनाइरहेको ठाउँमा हो भने फलामबाट बनेका पाइपको खट बाँध्नपर्छ । नेपाल सरकार तथा स्विजरल्याण्ड सरकारको सहयोगमा हेल्भेटास नेपालले सञ्चालन गरेको सुरक्षित आप्रवासन परियोजनाले वैदेशिक रोजगारीमा जाने निर्णय गरिसकेकालाई निःशुल्क तालिम दिन्छ । तालिममा सहभागी हुन सोमबार देखि शुक्रबार विहान ९ बजेदेखी बेलुकी ५ बजेसम्म मोवाइल नम्बर ९८४०२४८०३४ वा ९८४०२५५२८० मा फोन गर्नुहोला ।
प्रश्न: म वैदेशिक रोजगारीको लागि कतार जान चाहान्छु । म पहिलाे पटक जान लागेको हो । अब मैले के के गर्नु पर्छ ?
उत्तर: मनोज जी, सबैभन्दा पहिला त तपाईँ के काम गर्न जान चाहनुहुन्छ त्यही अनुसारको सीप सिक्नुहोस् । आफूसँग सीप भए विदेशमा कमाइ पनि राम्रो हुन्छ । तपाईँले गर्न चाहेको कामको माग कतारका कुन कुन कम्पनीबाट आएको छ भनेर हेर्न मिल्छ । त्यसका लागि वैदेशिक रोजगार विभागको वेवसाइटमा गएर वैदेशिक रोजगारीको खोजी भनेर लेखिएको बटन क्लिक गर्नुहोस् । र त्यहाँ दिइएको निर्देशन पालना गर्नुहोस् । कसरी हेर्न मैले यहाँ भिडियो लिंक पठाएको छु ।https://youtu.be/OWP8YdjwKJo अहिले सरकारले एजेण्...
प्रश्नः मसँग साथीले पठाएको भिजिट भिसाको म्याद एक महिना बाँकी छ । साथी पठाएको भिजिट भिसामा यूएई जान के के डकुमेण्ट चाहिन्छ ?
उत्तरः सन्जिब जी, भिजिट भिसामा यूएई जानका लागि सबैभन्दा पहिला त तपाईँको भ्रमणको उदेश्य प्रष्ट हुनु पर्‍यो । तपाईँ किन भिजिट भिसामा यूएई जान चाहानुहुन्छ ? तपाईँले दिएको कारण अध्यागमनलाई चित्तबुझ्दो हुन पर्छ । अर्को कुरा साथीले भिसा पठाएकाले तपाईँको साथीको पनि पासपोर्टको फोटोकपी, भिसाको कपि आवश्यक पर्छ । त्यस्तै तपाईँसँग यूएई जाने फर्किने दुईतर्फी टिकट अनिवार्य हुनपर्छ । यूएई गएर तपाईँ बस्ने र खाने ठेगाना पनि खुलाउन पर्छ । साथै तपाईँसँग एक हजार अमेरिकी डलर साथमा हुन...
गोविन्द श्रेष्ठ / यूएई
प्रश्नः अहिले म यूएईमा छु । तर म क्यान्सिलमा घर आउन चाहान्छुु । फेरि पाँच छ महिनापछि भिजिट भिसामा यूएई जान चाहान्छु । मिल्छ कि मिल्दैन होला ?
उत्तरः गोबिन्द जी, तपाईँ यूएईबाट भिसा क्यान्सिल गरेर आउँदा कम्पनीले कुनै पनि रोकतोक नगरी फर्किने अनुमती दिएको छ भने तपाईँ भिजिट भिसामा यूएई जानलाई समयको हदबन्दी हुदैन । तत्काल पनि जान पाउनुहुन्छ । तर कुनै अपराधिक क्रियाकलाप, अथवा कुनै गलत कुरामा तपाईँको नाम मुछिएको छ भने कहिलेकाहीँ यूएई कहिले पनि फर्किन नमिल्ने पनि हुन सक्छ । कसैलाई यति समय फर्किन पाउने भनेर पनि तोकिएको हुन्छ । तर सामान्य अवस्थामा यस्तो रोकतोक हुँदैन । अनि कहिले काही एउटै नाम भयो र अपराध गर्ने व्...
गोविन्दप्रसाद न्यौपाने / यूएई
प्रश्नः एकजना साथीले राम्रो काम लगाइदिन्छु भन्दै मलाई भिसा क्यान्सिल गर्न लगाए । मैले उनले भनेजस्तै २०२१ सम्म रहेको मेरो भिसा क्यान्सिल गरे । तर उसले भनेजस्तो काम रहेनछ । मैले नराम्रो काम नगर्ने भनेपछि उनले अर्को काम लगाइदिन्छु भनेका छन् । तर लगाइदिएका छैनन् । म अहिले खाली बसिरहेको छु । भिसा क्यान्सिल गरेको पनि एक महिना भइसक्यो । यस्तो अवस्थामा मैले कस्तो कानुनी उपचार पाउछु होला ?
उत्तरः गोविन्दप्रसाद जी, हामीले तपाईँको जिज्ञासा पिपुल फोरममा आवद्ध अधिवक्ता कृष्ण प्रसाद न्यौपानेसँग राखेका थियौं । उहाँले तपाईँलाई जतिसक्दो छिटो नेपाल फर्किन सुझाव दिनुभएको छ । तपाईँले भिसा क्यान्सिल गरेको पनि एक महिना हुन लागेकाले परदेशमा ओभरस्टे भएर बस्नु उपयुक्त हुँदैन । जति दिन बढ्दै गयो त्यती नै तिर्नुपर्ने ओभरस्टेवापतको रकम बढी तिर्न पर्छ । भोली काम मिलेन वा कुनै विकल्प भएन भने नेपाल फर्किन समस्या हुन्छ । तत्काल आफ्नो समस्या यूएईको आबुधाबीमा रहेको नेपाली दूता...
प्रश्नः मैले साउदीमा वेटरको कामका जानका लागि अन्तर्वार्ता दिएँ । अन्तर्वार्ता लिन एक जना विदेशी नागरिक पनि आएका थिए । उनले मलाई वेटरका लागि हैन स्टोरकिपरको काममा लान्छु भन्यो । त्यसपछि म्यानपावरले मलाई मेडिकल र प्रहरी रिपोर्ट पनि बनाउन लगायो । अब मैले साउदी गएर के काम पाउछु ? म्यानपावरलाई कति पैसा तिर्न पर्छ ? कहिले पैसा बुझाउदा उपयुक्त होला ? अनि साथमा के के कागजपत्र साथमा राख्नुपर्छ ?
उत्तरः दिल जी, तपाईँले वेटरको कामका जानका लागि अन्तर्वार्ता दिए पनि अन्तर्वार्ता लिने मानिसले स्टोर किपरको काममा लैजान्छु भनेपछि तपाईँ स्टोर किपरको काममा छनोट हुनुभयो । त्यसैले तपाईँले साउदी पुगेपछि काम पनि स्टोर किपरकै पाउनुहुन्छ । तर तपाईँले आफूले साउदी गएर गर्ने कामका बारेमा अन्तिम श्रम स्वीकृति लिएपछि वैदेशिक रोजगार विभागको वेवसाइटबाट थाहा पाउन सक्नुहुन्छ । तपाईँलाई यदी साउदीको कुनै होटलले वेटरको सट्टा स्टोरकिपरको काममा लैजान खोजेको हो भने तपाईँले त्यहाँ गएर हो...
प्रश्नः मलाई माल्टा पठाउँछु भनेर एक लाख रुपैयाँ दिए तर मेरो कुनै अफर लेटर वा भिसा आएन । पैसा फिर्ता दिदा ३२ हजार रुपैयाँ काटेर बाकी पैसा दियाे । मेराे पैसा किन काटेकाे हाेला ?
उत्तरः दिवस जी, हामीले तपाईँको जिज्ञासा पिपुल फोरममा आवद्ध अधिवक्ता कृष्णप्रसाद न्यौपानेसँग राखेका थियौं । तपाईँले म्यानपावर/एजेन्ट विरुद्ध वैदेशिक रोजगार विभागमा उजुरी दिएपछि कानूनी प्रक्रिया अनुसार रकम फिर्ता पाउनुभएको हो या म्यानपावरले माल्टा पठाउन नसकेपछि पैसा स्वत फिर्ता गरेको हो भनेर खुलाउनुभएको छैन । उहाँका अनुसार, यदी तपाईँलाई म्यानपावर आफैंले कुनै कानूनी प्रक्रियाबिनै पैसा फिर्ता दिएको हो भने कटाएर पैसा फिर्ता दिन पाइदैन । पैसा लिएर भनेको ठाउँमा पठाउन नसके...
चित्रराज भण्डारी/ यूएई
प्रश्नः म यूएई आएको एक वर्ष चार महिना भयो । म भिजिट भिसामा आएको हुँ । आउँदो भदौमा नेपाल आउँदैछु र श्रम गर्ने सोच बनाएकोछुँ । त्यसैले अब श्रम गर्दा के के कागजात चाहिन्छ ? के के प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्छ ?
उत्तरः चित्रराज जी, भिजिट भिसामा यूएई गएर काम गर्दा श्रम स्वीकृति नलिएको हुनाले नेपाल आउदf श्रम स्वीकृति अनिवार्य रुपमा लिनुहोला । विना श्रम यूएईमा काम गरिरहेको अवस्थामा केही भवीतब्य परेको खण्डमा उद्दार सहयोग पाउन समस्या हुनसक्छ । श्रम स्वीकृति लिनको लागि नेपाल दूतावास यूएईबाट सिफारिस पत्र लिन अनिवार्य छ । बिदामा नेपाल फर्किनुअघि आबुधावीमा रहेको नेपाल दूतावासबाट सिफारिस पत्र बनाउनु होला । त्यसका लागि आफूले काम गरिरहेको कम्पनीसँग गरेको श्रम सम्झौता...
दिनेश कुमार भुजेल
प्रश्नः माल्दिभसमा रोजगारीका लागि नेपाल सरकारले इजाजत दिएको छ कि छैन ? या गैरकानुनी रुपमा पठाउने गरिएको त छैन ? मैले माल्निदभ्सका लागि पासपोर्ट पेश गरेको सात महिना भयो केही पनि प्रतिक्रिया नै आएको छैन ।
उत्तरः माल्दिभ्स नेपाल सरकारले रोजगारीका लागि खुल्ला गरेको देश हो । माल्दिभ्स रोजगारीका लागि खुल्ला गरेको कारण गैरकानुनी रुपमा पठाउने भन्ने हुँदैन । तर तपाईँले पासपोर्ट बुझाएको सात महिना भइसकेको रहेछ । के कारणले कुनै प्रक्रिया अघि नबढेको हो भनेर म्यानपावरसँग बुझ्नुहोला । म्यानपावरले तिन महिना भन्दा बढि तपाईँको पासपोर्ट होल्ड गरेर राख्न मिल्दैन । तपाईँले आफ्नो समस्या समाधानको लागि वैदेशिक रोजगार विभागमा सम्पर्क राख्नु सक्नुहुन्छ ।
प्रश्नः म यूएई जान चाहन्छुँ महिलाले गार्मेन्ट वा ब्युटिपार्लरको काममा जानको लागि के गर्नुपर्छ ? तालिमप्राप्त पनि छैन म के गर्ने होला ?
उत्तरः सबिता जी, सरकारले गार्मेन्टको काममा अहिले महिलालाई विशेषगरी जोर्डन पठाउदै आएको छ । गार्मेन्टको तालिम तपाईँले निशुल्क लिन पाउनुहुन्छ । त्यसका लागि नेपाल सरकार तथा स्विजरल्याण्ड सरकारको सहयोगमा हेल्भेटास नेपालले सञ्चालन गरेको सुरक्षित आप्रवासन परियोजनाले वैदेशिक रोजगारीमा जाने निर्णय गरिसकेकालाई निःशुल्क तालिम दिन्छ । तालिममा सहभागी हुन इच्छुकले सोमबार देखि शुक्रबार विहान ९ बजेदेखी बेलुकी ५ बजेसम्म मोवाइल नम्बर ९८४०२४८०३४ वा ९८४०२५५२८० मा फोन गरेर थप जानक...
प्रश्नः मैले काम गरे अनुसारको तलब पाएको छैन । मैले के गर्नु पर्ला ?
उत्तरः गणेश जी, तपाईँलाई कुन देशमा र कस्तो काममा समस्या परेको हो भनेर खुलाउनुभएको छैन । यदी तपाईँले सम्झौता अनुसारको तलब नपाएको हो भने नेपालमा म्यानपावर विरुद्ध उजुरी दिन मिल्छ । त्यसका लागि तपाईँले काठमाण्डौको बुद्धनगरमा हरेको वैदेशिक रोजगार विभाग वा आफ्नै जिल्लामा गएर सिडियोलाई पनि निवेदन दिन सक्नुहुन्छ । सम्झौतामा उल्लेख गरे अनुसारको काम गरेर पनि तलब पाउनुभएको छैन भने नपुग तलब तपाईँलाई म्यानपावरले नै दिलाउनु पर्ने प्रावधान छ ।
विष्णुप्रसाद चौधरी / कैलाली
प्रश्नः म गार्मेन्टको काम सिकेर विदेश जान चाहान्छु । त्यसका लागि कहाँ र कसरी सम्पर्क राख्ने होला ?
उत्तरः विष्णु जी, विशेषगरी गार्मेन्टको सीप महिलाका लागि मात्र हो । पुरुषका लागि पनि विभिन्न सीप तालिमहरु सञ्चालन भइरहेका छन् । गार्मेन्ट लगायत विभिन्न तालिम निःशुल्क लिन पाइन्छ । नेपाल सरकार तथा स्विजरल्याण्ड सरकारको सहयोगमा हेल्भेटास नेपालले सञ्चालन गरेको सुरक्षित आप्रवासन परियोजनाले वैदेशिक रोजगारीमा जाने निर्णय गरिसकेकालाई निःशुल्क तालिम दिन्छ ।तालिममा सहभागी हुन इच्छुकले सोमबार देखि शुक्रबार विहान ९ बजेदेखी बेलुकी ५ बजेसम्म मोवाइल नम्बर ९८४०२४८०३४ वा ९८४०२५५२८० मा फ...
रमेश बहादुर शाही
प्रश्नः मलेसियाबाट नेपाल आएको ६ वर्ष भयो । म फेरि पनि मलेसिया जान चाहान्छु । तर म्यानपावरले भिसा लाग्दैन भन्छ । किन होला ? २०७४ सालको माघमा मैले मलेसियाका लागि भिसा अप्लाइ गरेको थिए । के मैले फेरि मलेसिया जान पाउछु होला ?
उत्तरः रमेश जी, मलेसियाको रोजगारी गएको जेठ २ गतेदेखि बन्द छ । मलेसिया जाने कामदार स्वथ्य परीक्षण लगायत विभिन्न बहानामा ठगीमा परे भन्दै नेपाल सरकारले जेठ २ गतेदेखि मलेसियाको रोजगारी बन्द गरेको हो । यो बीचमा नेपाल सरकार र मलेसिया सरकारबीच कामदार पठाउने विषयमा श्रम समझदारी पनि भैसकेको छ । कलिङ भिसा आएकाको हकमा भने श्रम स्कीकृती दिइएको पनि छ । तर तपाईँ पहिला मलेसिया बसेर फर्किए पनि अब नयाँ प्रक्रियाबाटै जानुपर्ने भएकाले तत्काललाई मलेसियाको रोजगारी नखुलेकाले म्यानप...
राजु दर्जी / गुल्मि
प्रश्नः म मुटु रोग लागेर मलेसियाबाट फर्केर अहिले घरमै बसिरहेको छु । मलेसिया गएको ६ महीनामै मुटुको धडकन कम भएर मलेसियाको होस्पिटलमा एक हप्ताको उपचारपछि मुटुमा पेस मेकर ब्यष्ट्रि राख्नु पर्ने र त्यसको खर्च पनि धेरै हुने भएकाले म नेपाल फर्के र अहिले ऋण काढेर ब्याट्रि राखे । तर म विदेश जादा म्यानपावरले गरेको बिमा कम्पनीले पैसा दिएन । मैले इन्युसेन्स कम्पनीबाट केहि पाउछु कि पाउदिन होला ? मैले कहाँ सम्पर्क गर्ने होला ?
उत्तरः राजु जी, मुटु रोगका सम्बन्धमा २०७३ माघ १५ पछि मात्रै बिमाले समेट्ने प्रावधान छ । यो समयभन्दा अघि श्रम स्वीकृती लिएर विदेश गएकाले मुटु रोग लागेमा क्षतिपूर्ति नपाउने प्रावधान थियो । तर यो प्रावधान परिर्माजन भइ २०७३ माघ १५ गतेदेखि मुटु रोगलाई पनि समावेश गरिएको छ । यदी तपाईँले २०७३ माघ १५ पछि श्रम स्वीकृती लिएर विदेश जानुभएको हो भने बिमाबाट क्षतिपूर्ति पाउन सक्नुहुन्छ । बिमाको पनि आफ्नै नियम हुने भएकाले तपाईँको कागजपत्र र तपाईँले गरेको बिमाको आधारमा मात्रै क्षतिपू...
राजु / ललितपुर
प्रश्नः म मलेसियामा २९ महिना र यूएईम ४ महिना बसेर फर्किएको हुँ । अब विदेश नगई स्वदेशमै केही गर्ने योजना छ । अहिले सरकारले विदेशबाट फर्किएका युवलाई अनुदान दिनेकुरा सुनेको थिए । यो कसरी पाउन सकिन्छ होला ?
उत्तरः राजु जी, सरकारले विदेशबाट फर्किएका युवालाई अनुदान दिने होइन । तपाईँले गलत कुरा सुन्नुभयो । सरकारले बाणिज्य बैंकहरुसँग समन्वय गरेर विदेशबाट फर्किएका र यही केही गर्ने योजना भएका युवालाई १० लाख रुपैयाँसम्म सहुलियतमा ऋण दिने हो । त्यसका लागि तपाईँको व्यवसायिक योजना हुन पर्छ । व्यवसायीक योजना अनुसार नै ऋण पाइने हो । तर ऋण चाहिँ जसरी पनि तिर्नु पर्छ । १० लाख रुपैयाँ सहुलियत ऋणका लागि पनि यो वर्षका लागि समय सकियो । तपाईले अर्को वर्ष सरकारले आवदेन आह्वान गरेको ब...
घनश्याम खड्का / मलेसिया
प्रश्नः मलेसिमा कहिलेबाट खुल्छ ?
उत्तरः घनश्याम जी, मलेसियाको रोजगारी गएको जेठदेखि नै बन्द छ । यो बिचमा खुलाउने प्रयास स्वरुप नेपाल र मेलेसियाबीच श्रम समझदारी पनि भइसकेको छ। तर कहिले खुल्ने भन्ने विषयमा अहिले श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले मौन छ । त्यसैले मलेसियाको रोजगारी कहिले खुल्छ यकिन छैन ।
प्रश्नः सरकार ले कामदार जापान पठाउदै छ तेस्को बारेमा जानकारी दिनु होला वा हामिले कहा सम्पर्क गर्न सकिन्छ बताइ सहयोग गरिदिनु होला ?
उत्तरः आरोग्य जी, सरकारले जापान कामदार पठाउने कुरा सत्य हो । तर कुन प्रक्रियाबाट कसरी पठाउने भन्नेबारे टुङ्गो लागेको छैन । नेपाल र जापानबीच कामदार पठाउने विषयमा छलफल भए पनि यसरी कामदार पठाउने भन्ने विषयमा कुनै औपचारिक निणर्य भएको छैन । जापानले कामदार लैजाने विषयमा विभिन्नकुराहरु बाहिर आइरहेका छन् । तर सरकारका तर्फबाट औपचारिक निणर्य आएको छैन ।
मिलन माझी / साउदी अरेविया
प्रश्नः श्रम गर्नको लागि काठमाडौ नै जानू पर्छ कि अरु ठाउँबाट पनि हुन्छ ?
उत्तर: मिलन जी, अहिले सरकारले पुनःश्रम स्वीकृती प्रदेशबाटै दिने व्यवस्था गरेको छ । तपाईँले तपाईँको प्रदेशमा रहेको श्रम कार्यलयबाटै पुनः श्रम स्वीकृत लिन सक्नुहुन्छ । जस्तै प्रदेश एकको विराटनगर, प्रदेश २ को जनकपुर, प्रदेश ४ को पोखराबाट, प्रदेश ५ को बुटवलबाट, प्रदेश ६ को सुर्खेत र प्रदेश ७ को धनगढीबाट पुनः श्रम स्वीकृती लिन सकिन्छ ।
धनबहादुर रोकाय / कतार
प्रश्नः म यहाँ आयको ४ महिना भयो । कतारको परिचयपत्र पनि बनेको छैन । तलब ८ सय दिन्छ काम चाहिँ १३ भण्टा गर्न पर्छ । म्यानपावर र मलाई पठाउने मान्छेलाई के गर्ने होला ?
उत्तरः धनबहादुर जी, तपाईँलाई कम्पनीले सम्झौता भन्दा बढी काम र कम तलब दिएको हो भने तपाईँले म्यानपावर या तपाईँलाई विदेश पठाउन सहयोग गर्ने एजेन्ट विरुद्ध काठमाण्डौको बुद्धनगरमा रहेको वैदेशिक रोजगार विभागमा उजुरी दिन सक्नुहुन्छ । त्यसका लागि तपाईँले बढी काम गरेको र कम तलब पाएको केही प्रमाण भने चाहिन्छ । तपाईँलाई कतारी आइडी कार्ड पनि नदिएर समस्या भएको छ र नेपाल फर्किन चाहानुहुन्छ भने नेपाल फर्किएको ३५ दिन भित्र विभागमा उजुरी दिनपर्छ । तपाईँको सम्झौता अनुसार कम भएको तलब द...
डिल्लीराज सेजुवाल / मलेसिया
प्रश्नः म मलेसिया आएको पनि तेह्र महिना भैसक्यो र मेडिकल पनि भयो तर कम्पनिले अहिले सम्म पास कार्ड दिएकाे छैन। मैले धेरै पटक फोन पनि गरिसके तर हुन्छ हुन्छ भन्छ टारिरह्न्छ। साथै नेपाल देखि आउदा गरेको एग्रिमेन्ट अनुसारकाे सेवा सुबिधा पनि दिदैन। मैले के गर्न सक्छु ?
उत्तरः तपाईँले सम्झौता अनुसारको तलब नपाएको हो भने तपाईँले नेपाल फर्किएर वैदेशिक रोजगार विभागमा म्यानपावर विरुद्ध निवेदन दिन सक्नुहुन्छ। तपाईँको सम्झौता अनुसार जति तलब पाउनुभएको छैन त्यो म्यानपावरले नै तपाईँलाई दिलाइदिनुपर्छ। तपाईँको सम्झौता पत्र र त्यहाँ पाएको तलबको कुनै प्रमाण सुरक्षित राख्नुहोला। कम्पनीले पास कार्ड नदिएको समस्याका लागि तपाईँले मलेसियामा रहेको नेपाली दूतावासमा सम्पर्क गर्न सक्नुुहुन्छ। नेपाली दूतावास मलेसियाको सम्पर्क ठेगाना:​ Wisma Paradise&nb...
भोजेन्द्र मगर / गुल्मी
प्रश्नः मलेसियामा भिसा लगाएको ८ महिना भयो। मेनपावरलाई ३० हजार दिएको छु। अहिले न पैसा दिन्छ न विदेश पठाउछ के गर्ने होला ?
उत्तरः भोजेन्द्र जी, गएको जेठ २ गतेदेखि सरकारले मलेसिया कामदार पठाउन रोकेको छ। कामदार ठगीमा परेको भन्दै बन्द भएको मलेसियाको रोजगारीको ढोका श्रम समझदारी हुँदा समेत खुल्न सकेको छैन। त्यसैले तपाईँलाई म्यानपावरले मलेसिया पठाउन नसकेको हुनसक्छ। तपाईँ मलेसिया नै जाँन चहानुहुन्छ भने भिसा लागेर पनि जाँन नपाएको कामदारका हकमा पनि छुट्टै व्यवस्था गर्ने सरकारले बताउदै आएको छ। रोकिएको रोजगारी खुलेसँगै म्यानपावरले तपाईँलाई पठाउन सक्छ।
दिपेन श्रेष्ठ / नवलपरासी
प्रश्नः दलालले मलाई टर्की पठाउँछु भनेर मसँग पासपोर्ट लिएर गयो। भिसा आयो। तर भिजिट भिसा रहेछ। मैले श्रम लिएर जान्छु भनेको मिल्दैन भन्छ। म के गर्ने होला ? अर्को पासपोर्ट लिएर विदेश जान मिल्छ कि मिल्दैन होला ?
उत्तरः दिपेन श्रेष्ठ जी, तपाईँको इच्छा विपरित म्यानपावरले भिजिट भिसामा पठाउन पाउँदैन। भिजिट भिसा भनेको काम गर्न जाँने भिसा होइन। यो भिसामा जाँदा गन्तव्य देशमा पुगेपछि अलपत्र परेका थुप्रै घटनाहरु छन्। त्यसैले तपाईँले दलाल विरुद्ध काठमाडौंको बुद्धनगरमा रहेको वैदेशिक रोजगार विभागमा गएर उजुरी दिन सक्नुहुन्छ। तपाईँको पासपोर्ट दलालबाट फिर्ता गर्न विभागले नै सघाउछ। अर्को पासपोर्ट लिनुपर्ने आवश्यकता नै पर्दैन।
प्रश्नः म एउटा महिला हुँ। वैदेशिक रोजगारीको लागि पोल्यान्डमा जानु कस्तो होला ? म वैदेशिक रोजगारीमा पोल्यान्ड जfन खोजेको तर म्यानपावरले भनेको समयमा काम नगरेको हुनाले म जान चहान्न। मैले एक लाख रुपैयाँ बुझाएको छु। त्यो पैसा फिर्ता हुदैन भन्छ। पैसा फिर्ता गर्नलाई के गर्नुपर्ला ?
उत्तरः नगिमा जी, तपाईँको इच्छा छ भने सरकारले रोजगारीका लागि खुल्ला गरेको १०७ वटै देशमा जान सक्नुहुन्छ। त्यो तपाईँको अधिकार हो। तपाईँले प्रक्रिया पनि अघि बढाउनु भएको रहेछ। म्यानपावरले लिएको पैसा फिर्ता गर्नका लागि म्यानपावर विरुद्ध काठमाडौंको बुद्धनगरमा रहेको वैदेशिक रोजगार विभागमा गएर उजुरी दिन सक्नुहुन्छ। तर त्यसका लागि तपाईँले म्यानपावरलाई बुझाएको पैसाको प्रमाण चाहिँन्छ। पैसा फिर्ता नहुने भन्ने हुँदैन। विभागले नै तपाईँको पैसा म्यानपावरबाट फिर्ता गर्न सहयोग गर्छ।
प्रश्नः म साउदी अरेविया आएको ६ महिना भयो। म घर फर्किन चाहन्छु। के गर्न पर्ला ?
उत्तरः सन्जय राई जी, साउदीको कानुन अनुसार तपाईँ घर फर्किनका लागि रोजगारदाताको अनुमती अनिवार्य रुपमा चाहिँन्छ। रोजगारदाताको अनुमती बिना तपाईँ स्वदेश फर्किन सक्नुहुन्छ। त्यसैले तपाईँले पहिलो कुरा रोजगारदातासँग घर फर्किँने अनुमति लिन पर्यो। यदी रोजगारदाताले अनुमति दिएन भने पनि तपाईँसँग अर्को विकल्प छ। तपाईँको परिवारले काठमाडौंको बुद्ध नगरमा रहेको वैदेशिक रोजगार विभागमा गएर तपाईँलाई स्वदेश फर्काउनका लागि निवेदन दिन सक्छन्। म्यानपावले तपाईँको रोजगारदातालाई अनुरोध गरिद...
प्रश्नः स्ट्याम्पिङ भएको मलेसियाको भिसालाई नेपाल सरकार अर्थात श्रम मन्त्रालयले श्रम स्वीकृती दिन्छ कि दिन्न होला ?
उत्तरः अमालाल जी, मलेसिया र नेपालबीच गएको कात्तिक १२ गते श्रम समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भइसकेको छ। तर रोजगारीको ढोका अझै खुलेको छैन। मलेसियाको हकमा पुनः श्रम स्वीकृती बाहेक तत्काललाई सरकारले मलेसियाका लागि श्रम स्वीकृती दिएको छैन्। सबै प्राविधिक विषय मिलाएर जतिसक्दो चाडो मलेसियाको रोजगारी खुलाउने श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री गोकर्ण विष्टले बताउनुभएको छ।
अमृत केसी / कतार
प्रश्नः म अहिले कतारमा छु। मैले सुनेको कतारबाट घर आउनको लागि चाहिने एक्जिट परमिट बिनै जति बेला पनि घर जान सकिन्छ रे के यो सत्य हो ?
उत्तरः अमृत जी, तपाईँले सुन्नुभएको कुरा ठीक हो। कतारले श्रम कानुनमा सुधार गर्दै एक्जिट परमिट अथवा घर फर्किन रोजगारदाताको अनुमति नचाहिने व्यवस्था गरेको हो। जसअनुसार कतारबाट फर्किंन पहिलेजस्तो रोजगादाताको अनुमति चाहिँदैन।
सन्तोष धिताल / युएई
प्रश्नः म युएईबाट फर्किएको छु। सहुलियत ऋणका लागि के के प्रक्रिया गर्नुपर्छ होला ?
उत्तरः सन्तोष जी, सरकारले दिने सहुलियत ऋणका लागि सर्वप्रथम त तपाईँ विदेशबाट फर्किंएको तीन वर्ष कट्नु हुँदैन। तपाईँले वैदेशिक रोजगार प्रवद्र्धन बोर्डको कार्यालय नयाँ बानेश्वरमा आफ्नो व्यवसायीक योजना सहित निवेदन दिन सक्नुहुनछ। अथवा इमेलमार्फत पनि ऋणका लागि निवेदन दिन सकिन्छ। निवेदन दिँदैमा ऋण पाइन्छ भन्ने हुँदैन। तपाईँले पेश गरेको व्यसायीक योजनाको आधारमा तपाईँले सरकारले ऋणका लागि छनोट गर्दछ।
रामराज श्रेष्ठ / बहराइन
प्रश्नः मैले तीन बर्ष बहाराइनमा काम गरीसके अब नेपाल छुट्टिमा जाने तयारीमा छु। यहि डिसेम्बर १६ मा नेपाल जाने टिकट पनि छ। छुटी १०० दिन छ। काठमाडौं पुग्ने बितिकै श्रम गरेर गाउँ तिर जाने बिचार गरेको थिए। तर सुन्दैछु सय दिनभन्दा बढी समय सम्म श्रम गरेर नेपाल बस्न पाइन्दैन रे। सत्य कुरा के होला जानकारी पाएँ आभारी हुने थिए।
उत्तरः रामराज जी, तपाईँको समस्या हामीले पिपुल्स फोरममा आवद्ध अधिवक्ता कृष्णप्रसाद न्यौपानेसँग राखेका थियौं। उहाँका अनुसार श्रम गरेको ९० दिनभन्दा बढी बस्न नपाइने कानुनी व्यवस्था नेपालमा छैन। तर तपाईँलाई बहराइनबाट फर्किदा कतिदिन नेपालमा बस्न अनुमति दिएको छ त्यसमा भरपर्दछ। तपाईँको १०० दिन बिदा छ भने यो अवधिमा तपाईँले जहिले श्रम स्वीकृती गर्दा पनि हुन्छ। तपाईँलाई जानकारीका लागिः अहिले नेपालमा श्रम स्वीकृती लिनका लागि अनलाइन टोकन प्रणाली लागू भएको छ। टोकनमा प्राप्त समयमा...
सबिन राई / साउदी अरेबिया
प्रश्नः म साउदी आएको छ महिना भयो। अहिले घरमा बुबा बित्नु भएकाले एक महिनाको लागि बिदामा घर जान चहान्छु तर दिदैन के गर्ने होला ?
उत्तरः सबिन जी, तपाईँको समस्या हामीले पिपुल्स फोरममा आवद्ध अधिवक्ता राजेश भण्डारीसँग राखेका थियौं। उहाँका अनुसार साउदीबाट फर्किने कुरा साहु मै भर पर्दछ। त्यहाँको कानून अनुसार तपाईँले आफ्ने समस्या राख्दा पनि साहुले पठाउन चाहेन भने तपाईँ फर्किन गाह्रो हुन्छ। त्यसैले यहाँ रहेका परिवारले तपाईँलाई फर्काउनका लागि वैदेशिक रोजगार विभागमा निवेदन दिन सक्छन्। विभागमा निवेदन दिए पश्चात म्यानपावरले तपाईँको कम्पनीलाई अनुरोध गरिदियो भने त्यहाँबाट फर्किन पाउने सम्भावना रहन्छ। तपाईँले ...
प्रश्न : म रोजगारीका लागि कतार जाँदै छु। मलाई काम गर्न जाने कम्पनीका बारेमा थाहा पाउन मन लागेको छ। त्यसका लागि मैले के गर्नु पर्ला ?
उत्तर : कुमुद खनाल, प्रथम उपाध्यक्ष, नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघ – हरेक रोजगारदाता कम्पनीले म्यानपावर कम्पनीलाई डिमान्ड बुक पठाएको हुन्छ। त्यसमा कम्पनीको सम्पूर्ण जानकारी जस्तै: कम्पनीको उत्पादनहरु, कार्यस्थल, कामदार खाने बस्ने ठाँउ लगायत फोटो सहित हुन्छ। तपार्इंले त्याे हेर्न सक्नुहुन्छ। अथवा कम्पनीको वेब साइट मागेर आफैले वा साथीको सहयोग लिएर कम्पनीको सम्पूर्ण जानकारी लिन सकिन्छ।
एस के बुढा / रोल्पा
प्रश्न : म अहिले ४५ बर्षको भएँ। रोजगारीका लागि विदेश जाने सोच बनाएको छु। वैदेशिक रोजगारीमा जान उमेर हद कति छ ? यदी सक्छु भने कुन देश जान सक्छु ?
उत्तर : नियम अनुसार पहिलो पटक वैदेशिक रोजगारीका लागि जानेका लागि बढिमा ३९ वर्ष उमेर तोकिएको छ। त्यसैले तपाईं पहिलो पटक विदेश जाँदै हुनुहुन्छ भने विदेश जानसक्ने सम्भावना थोरै छ। यदि तपाईं पहिले पनि रोजगारीका लागि विदेश गएर फर्कनु भएको हो भने पहिले तपाईंले काम गरेको आधारमा त्यहि कामका लागि जान पाउनुहुन्छ। त्यसका लागि सरकारले स्वीकृति दिएको म्यानपावर कम्पनीमा सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ।
महेश बहादुर चन्द
प्रश्न : नेपाली पासपोर्ट भएकाले भारतको बाटो हुँदै विदेश जान सकिन्छ कि सकिन्न ? यसरी जाँदा सुरक्षित भइन्छ कि भइन्न ?
उत्तर : नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाहेक अरु देशबाट वैदेशिक रोजगारीमा जानु अवैधानिक काम हो। यसरी जाँदा कुनै अप्ठेरो परे सरकार र अरु निकायले सहयोग गर्ने आधार हुँदैन र सहयोग पनि गर्दैनन। त्यसैले वैदेशिक रोजगारीका लागि जाँदै हुनुहुन्छ भने त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल हुँदै श्रम स्वीकृति लिएर मात्रै जानुहोला।
ध्रुव भण्डारी / धादिङ
प्रश्न : मलेसियाका लागि मेरो कलीङ्ग भिसा आएको थियो । अन्तिम श्रमस्वीकृति पनि भएको थियो। तर मेरो पेटमा घाँउ देखियो। छ महिना यात्रा नर्गन डाक्टरले सुझाव दिएकोले भिसा रद्द गराएँ। भिसा रद्द गराए वापत मैले म्यानपावर कम्पनीलाई कति पैसा तिर्नुपर्छ ?
उत्तर : कुमुद खनाल, प्रथम उपाध्यक्ष, नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघ – वैदेशिक रोजगार विभाग ऐन २०६४ ले गरेको व्यवस्था अनुसार भिसा प्राप्त भएपछि जान नचाहेको खण्डमा लागेको खर्च क्षतिपुर्ति दिनु पर्छ। भिसा वापत वैदेशिक रोजगार कम्पनीहरुले पनि पैसा तिरेका हुन्छन्। भिसामा छाप नलागेको खण्डमा सात हजार रुपैया र लागीसकेको भए १० हजार रुपैया तिर्नु पर्ने हुन्छ। प्रमाण हेरेर त्यसै अनुशार रकम भुक्तान गर्दा हुन्छ।
ईन्दल खाङ्ग/ सप्तरी
प्रश्नः म दुवईमा वाचम्यानको लागि अन्तरवार्ता दिएर जाने तर्खरमा छु। म्यानपावरलाई लागत खर्च बारेमा सोधखोज गर्दा मेरो अफिस खर्च जोडेर कुल रकम एक लाख पैतालीस हजार लाग्छ भन्यो। तर भर्पाइ चाहि दश हजारको मात्र दिन्छ रे। विमानस्थलमा सोधपुछ गरे पनि दश हजार नै भन्नुपर्छ नत्र झन्झट आइलाग्छ र विदेश जान पाइन्न रे। त्यसैले हामीले भने अनुसार गर वा आफ्नो पासपोर्ट फिर्ता लिएर जाउ भनेको छ। म विदेश गएर कुनै समस्या परि फर्कनु परे कुन उपायले कहाँ गएर तिरेको रकम उठाउने ? यस्तै समस्या मेरै ६ जना साथीहरूको छ। अब कि त एक लाख पैतालीस हजार तिरेर दश हजारको भार्पाइ लिएर जाउँ ? कि त विदेशनै जान नपाउँ? के प्रक्रिया पूरा गरेर जाउँ?
उत्तरः ईन्दल जी, यस्तो अवस्थामा तपाईंसँग तिन बिकल्प उपलब्ध छन्। पहिलोः म्यानपावरले तपाईंको नाममा श्रम स्विकृती लिइसकेको छ भने तपाईंले वैदेशिक रोजगार विभागमा फ्री भिसामा जान पाउँ भनेर निवेदन दिन सक्नुहुन्छ। त्यसको लागि चाहिने कानुनी सहायता तपाईंले पिपुल फोरमबाट निःशुल्क लिन सक्नुहुन्छ। तपाईंले पिपुल फोरमलाई 01-4423973 वा 4787226 मा सम्पर्क गर्नुहोला। दोस्रोः तपाईंले अन्य कुनै म्यानपावर खोज्नुहोस् जसले फ्...
प्रश्नः म कतार जान भनेर काठमाडौं आएको थिएँ। मेडिकलमा अनफिट भएको रहेछु। तर दलालले फिट छौ भनेर एक लाख ५० हजार लियो। मैले अस्पतालमा सोधेर बल्ल यो थाहा पाएँ। मेरो पैसा २०७१ सालबाट दिन्छु भनेर पनि अलिहेसम्म दिएको छैन। उसलाई के सजाय गर्न सकिन्छ ?
उत्तरः तुलबहादुर जी, पिपुल्स फोरममा आवद्ध अधिवक्ता कृष्णप्रसाद न्यौपानेका अनुसार दलाललाई पैसा बुझाएको प्रमाण तपाईंसँग छ छैन त्यो खुलाउनुभएको छैन। दलालले मेडिकल फेल हुँदाहुँदै पैसा लिए पनि कानुनी हिसावले हेर्दा तपाईंले उजुरी गर्ने म्याद सकियो। तपाईंले दलालविरुद्ध ३५ दिनभित्र वैदेशिक रोगार विभागमा उजुरी गर्न सक्नुहुन्थ्यो तर हदम्याद सकियो। तपाईं दुई वर्ष भन्दा लामो समयदेखि दलालको भरमा बसिरहनुभएको छ। त्यसैले सहमतिमा रकम अशुल्ने बाहेक अर्को विकल्प छैन।
प्रश्नः कतारबाट मेरो भाइ तीन महिना नपुग्दै फर्किएको छ। काम राम्रो नभएर फर्किएको हो। अब उसले कहाँ कस्तो क्षतिपूर्ति पाउछ ?
उत्तरः विरेन्द्रप्रसाद जी, हामीले तपाईंले सोध्नुभएको समस्या पिपुल्स फोरममा आवद्ध अधिवक्ता कृष्णप्रसाद न्यौपानेसँग राखेका थियौं। उहाँका अनुसार तपाईंको भाइ सम्झौता पत्रमा उल्लेख भएभन्दा फरक काममा परेर समस्यामा परेको हो भने क्षतिपूर्ति पाउनुहुन्छ। वा काममा अप्ठेरो परेर फर्किएको हो भनेपनि काठमाडौंको वुद्धनगरमा रहेको पिपुल्स फोरममा गएर क्षतिपूर्तिका लागि सहायता लिन सक्नुहुन्छ। थप जानकारीका लागि ९८४१४२२४७१ मा सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ।
प्रश्नः म अहिले नेपालमा काम गरिरहेको छु तर म जापान जान इच्छुक छु। कोरियाले जस्तैगरी जापानले पनि नेपाली कामदार लैजाने कुरा सुनिरहेको छु। के यो साँचो हो ? जानकारी पाए आभारी हुने थिए ?
उत्तरः चुदराज जी, तपाईँले सुन्नुभएको कुरा ठीक हो। श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री गोकर्ण बिष्टले नेपालका लागि जापानका राजदूतसँगको भेटमा कोरिया कामदार पठाउने मोडलमा नै जापानमा पनि कामदार पठाउने प्रस्ताव राख्नुभएको थियो। जापानका राजदूतले पनि सकारात्मक प्रतिक्रिया दिनुभएको थियो। तर अहिलेलाई यस विषयमा कुनै पनि प्रक्रिया अघि बढेको छैन।
घनश्यम खड्का र निर हसन खान
प्रश्नः मलेसिया कहिलेदेखि जान पाइन्छ होला ?
उत्तरः घनश्यम जि र निर हसन जी, कामदार ठगीमा परे भनेर गएको जेठ २ गतेदेखि बन्द भएको मलेसियाको रोजगारीका विषयमा सकारात्मक नतिजा आएको छ। त्यो भनेको नेपाल र मलेसियाबिच श्रम समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भएको छ। श्रम समझदारी भएपछि पनि रोजगारी खुल्न भने अझै केही समय लाग्ने भएको छ। कामदार कसरी पठाउने भन्ने विषयमा प्रविधिक टोलीले अध्ययन गरिरहेका छन्। टोलीको सुझाव अनुसार नै सक्दो छिटो मलेसियाको रोजगारीको बाटो खुल्ने श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले जनाएको छ।
प्रश्नः म मलेसिया आएको एक वर्ष भयो। भनेजस्तो काम र दाम पनि पाएको छु। तर कम्पनीले मेडिकल गरेको छैन। यसमा के गर्न सकिन्छ ?
उत्तरः डिल्लीराज जी, पिपुल्स फोरममा आवद्ध अधिवक्ता कृष्णप्रसाद न्यौपानेका अनुसार तपाईँले काम पाइराख्नु भएको छ। तर एक वर्ष बित्दा पनि कम्पनीले मेडिकल गरिदिएको छैन भन्दैमा तपाईँ मेडिकल अनफिट हैन। तपाईँको स्वास्थ्य राम्रो भएर तपाईँलाई कम्पनीले स्वीकार गरेर काम लगाएको हुन पर्छ। कम्पनीले मेडिकल गरिदिएको छैन भने त्यसमा तपाईँ जिम्मेवार हुनुहुन्न। रोजगारदाता स्वयम नै जिम्मेवार हुन्छ। तपाईँले आत्तिनु पर्ने अवसथा छैन।
मोहनप्रसाद कडेल / साउदी अरेविया
प्रश्नः हाम्रो बेसिक तलब किन जहिले पनि ७ सय मात्र होला ?
उत्तरः मोहनप्रसाद जि, तपाईँको सम्झौता पत्रमा कति तलब छ भन्ने कुरा खुलाउनु भएको छैन। तर तपाईँले यदी सम्झौता भन्दा कम तलब पाउनुभएको हो भने पिपुल्स फोरममा आवद्ध अधिवक्ता कृष्णप्रसाद न्यौपानेका अनुसार तपाईँले स्वदेश फर्किएर पनि सम्झौता अनुरुपको तलब दावी गर्न पाउनुहुन्छ। तपाईँलाई पठाउने म्यानपावर कम्पनीले नै तपाईँले सम्झौता अनुसार नपाएको बाँकी तलब दिलाउँछ। तपाईँलाई काम गर्न मन छ भने त्यही कम्पनीमा काम गर्न सक्नुहुन्छ। र नेपाल फर्किएर बाँकी रहेको तलब दावी गर्न सक्नुहुन्छ। तर त्यसक...
खिलबहादुर शंकर / मलेसिया
प्रश्नः म मलेसिया आएको पाँच वर्ष भयो। २०१८ मा मेरो भिसा लागेको छैन। कम्पनीलाई सोध्दा प्रोशेस हुँदैछ भन्छ। ९ महिना भइसक्यो भिसा बिना नै काम गरेको। म कसरी नेपाल फर्किने होला ?
उत्तरः खिलबहादुर जि, हामीले तपाईँको समस्या पिपुल्स फोरममा आवद्ध अधिवक्ता कृष्णप्रसाद न्यौपानेसँग राखेका थियौं। उहाँका अनुसार भिसा बिना नै तपाईँले मलेसियामा काम गरेको लामो समय भएकाले तपाईँलाई भिसा अवधिभन्दा बढि बसे बापतको जरिवाना हुन सक्छ। तपाईँको जागिर पनि भिसा बिना असुरक्षित छ। त्यसैले तपाईँ जसरी पनि नेपाल फर्किन पर्छ। त्यसैले मलेसियाको क्यालालामपुरमा रहेको नेपाली दूतावासमा गएर आफ्नो समस्या राख्नुहोला। कम्पनीमा काम गरिरहेको तर भिसा नलागेको खुल्ने कुनै प्रमाण भएमा ...
कुशल पुन /रोल्पा
प्रश्नः म विदेश जान चाहन्छु। प्लस टु पास गरेको छु। तर कुनै सीप छैन। निःशुल्क सीप सिक्नका लागि कहाँ सम्पर्क राख्नुपर्छ होला ?
उत्तरः कुशल जी, सीप सिकेर विदेश जाने निर्णय गर्नुभएको तपाईंलाई बधाई छ। सीप सिकेर जाँदा विदेशमा भनेको काम र तलब सुविधा पाइन्छ। सरकारले पनि सीप भएका युवालाई मात्रै विदेश पठाउने गरी व्यवस्था गर्दैछ। अहिले शहर्रपिच्छे निःशुल्क सीप सिकाउने संस्था खुलेका छन्। तपाईं बसेको वा आसपासका जिल्ला यस्ता अवसर उपलब्ध हुन सक्छन्। विस्तृत जानकारीका लागि रोजगार सूचना केन्द्र दाङको फोन नम्बर ०८२ ५२१९३७ र ५२०५४६ बुझ्न सक्नुहुन्छ।
जित नारायण गुभाजु
प्रश्नः मेरो बहिनी जयन्ती गुभाजुलाई पोल्याण्ड पठाइदिन्छु भन्दै ग्वार्कोमा रहेको दृष्मा ओभरसिजले गएको वर्षको कात्तिकमा एक लाख रुपैयाँ लियो। एक वर्ष बित्न लाग्दा पनि विदेश पठाएको छैन। अलमलाइरहेको छ। यो अवस्थामा के गर्ने होला ?
उत्तरः जित नारायण जी, तपाईंको बहिनीले म्यानपावरलाई पासपोर्ट बुझाउनुभएको छ भने तीन महिनाभन्दा म्यानपावरले राख्न पाउदैन। अर्कोकुरा तपाईंसँग म्यानपावरलाई पैसा दिएको कुनै प्रमाण छ कि छैन ? यदि प्रमाण छ भने म्यानपावर विरुद्ध तपाईंले काठमाडौंको बुद्धनगरमा रहेको वैदेशिक रोजगार विभागमा उजुरी दिन सक्नुहुन्छ।
प्रश्नः वैदेशिक रोजगार विभागमा उजुरी दिएको कति दिनमा म्यानपावरबाट पासपोर्ट फिर्ता पाइएला ?
उत्तरः जगदिश जी, अधिवक्ता कृष्णप्रसाद न्यौपानेका अनुसार कुनै प्रक्रिया अघि बढाएको छैन भने तपाईंले पासपोर्ट फिर्ता माग्दा म्यानपावरले तुरुन्त दिनुपर्छ । उजुरी गर्दा विभागले म्यानपावरका सञ्चालकलाई बोलाएर तुरुन्त पासपोर्ट फिर्ता गर्न लगाउँछ । तर श्रमस्वीकृति लिने लगायतका प्रक्रिया अगाडि बढाएको भए चाहिँ सहमतिमा पासपोर्ट फिर्ता लिनुपर्छ । त्यसका लागि म्यानपावरले खर्च गरेको पैसा तपाईंबाट लिन सक्छ ।
प्रश्नः यस पटकको बजेट घोषणामा विदेशबाट फर्किएकालाई व्यवसाय गर्न सरकारले १० लाखसम्म ऋण दिने भन्ने सुनियो तर कसरी त्यो ऋण लिन सकिन्छ?
उत्तरः साथी तपाईंको जिज्ञासा हामीले अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव तथा प्रवक्ता झक्कप्रसाद आचार्यसँग राखेका छौं । उहाँका अनुसार सरकारले विदेशबाट फर्किएका युवाको सीप प्रमाणिकरण गरेर , सीपसँग सम्बन्धित के परियोजना सञ्चालन गर्ने हो त्यसको प्रस्तावका आधारमा ऋण दिने हो । तर अहिले यसको कार्यविधि बनेको छैन । केहि महिना भित्रमा कार्यविधि बनेपछि त्यसकै आधारमा खुल्ला आवेदन माग गरी ऋण दिने प्रक्रिया सुरु गरिने छ।
प्रश्नः वैदेशिक रोजगारमा जाँदा श्रम स्वीकृति दिइन्छ, जम्मा २ वर्षको । तर बीमा चाहिँ ३ वर्षको अनिवार्य गर्न लगाइन्छ । ३ वर्ष गरिएको बीमा २ वर्षको श्रमस्वीकृति सँगै सकिन्छ । अथवा २ वर्ष समय कटेसी ३ वर्ष नपुग्दै केही भएको खण्डमा इन्स्योरेन्स जवाफदेही हुँदैन । यस्तो किन ? बीमा सँगै श्रमस्वीकृति पनि ३ वर्षको नै पाउनु पर्ने होइन र ?
उत्तरः जिएस जी साउदी अरब, युएई, कतार, कुवेत, ओमान, बहराइन जस्ता खाडीका देशमा २ वर्षका लागि श्रमस्वीकृति दिइन्छ । त्यस्तै मलेसियामा रोजगारीका लागि जाने कामदारलाई ३ वर्षको श्रम स्वीकृति दिने चलन छ । श्रम स्वीकृति सकिएपछि त्यही कम्पनी र देशमा रोजगारी गर्न जान पुनः स्वीकृति लिनुपर्छ । बीमाको हकमा २ वर्षका लागि गइने देशमा ३ वर्ष अवधि मान्य हुने गरी ३ वर्ष श्रमस्वीकृति दिइने देशमा ४ वर्ष मान्य हुने गरी बीमाको प्रिमियम दिने गरिएको छ । यसअघि भने श्रमस्वीकृतिको अवधि भन्दा ६ महिना ध...
प्रश्नः हिजोआज मलेसियाको रोजगारीमा नेपाली कामदार कहिलेदेखि लैजाने भनेर केही जानकारी आएको छैन । हामी कलिङ भिसा लागेर बसेका छौ । मलेसिया पठाउन सरकारले के पहल गरिरहेको छ ।
उत्तरः प्रकाश जी, जेठ २ गतेसम्म अन्तिम श्रमस्वीकृति लिएका कामदार मलेसिया जान पाउने भएका छन् । नयाँ कामदार र कलिङ भिसा आइसकेकाको हकमा अहिले केही निर्णय भएको छैन । नेपाल र मलेसिया सरकारबिच नै सम्झौता गरेर कामदार लैजाने प्रयास भइरहेको छ । त्यसका लागि विभिन्न छलफल भएका छन्।
बाबुलाल चौधरी / मलेसिया
प्रश्नः म एक लाख ५० हजार रुपैयाँ तिरेर मलेसिया आए । तर भनेको जस्तो काम र कमाइ भएन । कम्पनीका मान्छेले कुटपिट गर्छन् । खान पनि भनेको बेलामा दिँदैन् । आफ्नो समस्या म्यानपावरलाई राखेँ । तर हुन्छ हुन्छ भनेर टार्छ म्यानपावरले । एजेन्टलाई फोन गर्दा फोनै उठाउँदैन । यो कम्पनीमा काम गर्ने वातावरण नै छैन् । म के गरौं ?
उत्तरः बाबुलाल जी, हामीले तपाईँको समस्या प्रवासी नेपाली समन्वय समिती पिएनसीसीका महासचिव सोमप्रसाद लामिछानेसँग राखेका थिये । उहाँले तपाईँलाई मलेसियामा रहेको नेपाली दूतावासमा आफ्ना समस्या राख्न सुझाव दिनुभएको । साथै तपाईँले मलेसियामा रहेका पिएनसिसीका प्रतिनिधि रामचन्द्र नेपालसँग पनि आफ्ना समस्या राख्न सक्नुहुन्छ । १६६०४५६८० नम्बरमा तपाईँले रामचद्र नेपाललाई आफ्ना समस्या राख्न सक्नुहुन्छ ।
प्रकाश पौडेल / बाग्लुङ
प्रश्नः म वैदेशिक रोजगारीमा जान चाहन्छु। तर मेरो रगतमा विलिरोविनको मात्रा तीन देखि चार एमजी छ। अर्थात् यसको मात्रा बढी हुनुलाई मेडिकल भाषामा जन्डिस भनिदो रहेछ। बाँकी रिपोर्ट सबै ठिक छ। डाक्टरले पनि सबै ठिकै छ, तर रोजगारीका लागि विदेश जान चाहिँ फिट हुन्छ कि हुन्न भन्ने हामीलाई थाहा हुन्न भन्नुभयाे। अब म विदेश जान सक्छु कि सक्दिन। अन्त्यमा पोर्चुगल, जापान, रसिया, युरोप जान खाडी मुलुकको जस्तो मेडिकल पास गर्नुपर्ने बाध्यकारी नियम छ कि छैन?
उत्तरः प्रकाश जी, नेपाल स्वास्थ्य व्यवसायी महासंघका केन्द्रीय प्रतिनिधि सुरेश पौडेलका अनुसार सामान्य मानिसमा विलिरोविनको मात्रा ०.४ देखि १.४ एमजीसम्म हुन्छ। तपाईंको शरीरमा यसको मात्रा निकै उच्च रहेको देखिन्छ। यस्तो अवस्थालाई रगतमा खराबी आएको भनिन्छ र लाखौंमा एक दुई जनालाई मात्र हुन्छ। जन्मजात नै विलिरोविनको उच्च भएका कारण तपाईंको शरीरमा अरु असर नदेखिएको हुनसक्छ। अनि, विलिरोविनको मात्रा शरीरमा उच्च भएकाहरुले रोजगारीका लागि भारत बाहेकका अन्य देशमा जान पाउँदैनन्। किनभने भार...
राजेश / युएई
प्रश्नः युएई सुरक्षा गार्डको भिसा आउन कति समय लाग्छ ? कति समय बितेपछि भिसा लाग्ने / नलाग्ने पक्का हुन्छ?
उत्तरः राजेश जी, नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका पूर्व अध्यक्ष बलबहादुर तामाङका अनुसार सुरक्षा गार्डमा कुन क्षेत्रमा जाने हो त्यस अनुसार भिसा लाग्ने समय निर्धारण हुन्छ। तपाईं निजी क्षेत्रमा सुरक्षा गार्डको काम गर्न चाहनुहुन्छ भने कामको निवेदन दिएको २ दिनमा नै भिसा लाग्छ। र सरकारी कम्पनीमा चाहिँ सुरक्षा गार्डको भिसा लाग्न कम्तिमा १० दिन र बढीमा १५ दिनको समय लाग्छ। तर समयमै भिसा लाग्न कोटा हुनुपर्छ। कोटा छैन भने लामो समय पनि लाग्न सक्छ। कोटाका लागि पर्खाईको सूचिमा पहिले न...
रमेश चौधरी / बहराईन
प्रश्नः कामदारले श्रम सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर गर्दा म्यानपावर कम्पनीमा गर्ने हो कि श्रम विभागमा हो?
उत्तरः रमेश जी, वैदेशिक रोजगार व्यवसायीहरुबाट रोजगारीका लागि विदेश जाँदा म्यानपावरले नै श्रम सम्झौता गर्छ। वैदेशिक रोजगार विभागले श्रमस्वीकृति दिने हो।
मेघनाथ आचार्य / दौलतपुर
प्रश्न : मेरो साथी मलेसिया गएको थियो गएको आठ महिना पछि भदौ ६ गते उसको मृत्यु भएको थियो । अब त्यस कम्पनीबाट क्षतिपुर्ति पाइन्छ पाइदैन ?
उत्तर : कुमुद खनाल, प्रथम उपाध्यक्ष, वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघ - अहिले सम्म वैदेशिक रोजगारमा जती पनी जानु भएको छ, उहाँहरुको हकमा कार्यस्थल दुर्घटना बिमाको मात्रै प्रावधान छ । मृत्यु कसरी भयो यकीन हुन सकेन । मृत्युको कारण थाहा नभई बिमा रकम पाइन्छ की पाइदैन यसै भन्न मिल्दैन । काम गर्ने अवधि भित्र (duty hour) मा मृत्यु भएको वा बाटोमा दुर्घटना भएको भए बिमा रकम पाउनु हुन्छ । मृत्यु भइसकेपछि लास पठाउनु अगाडी नै कम्पनीले बिमा सम्बन्धि सम्...
मिना थापा / सुर्खेत
प्रश्न : कसरी विदेश गए महिला कामदार सुरक्षित हुन सक्छन् ?
उत्तर : मिना जी, सिप सिकेर सिधै म्यानपावर कम्पनीमार्फत विदेश जाँदा पुरुष होस् वा महिला, उनीहरुको काम र कमाई राम्रो हुन्छ । औद्योगिक क्षेत्र, होटल मजदुर, सरसफाई मजदुरको काममा नेपाली महिला कामदार पनि विदेश गइरहेका छन् । दलालको भर पर्नु हुन्न । दलालले एउटा काम भनेर अर्को काममा पठाउन सक्छन् । त्यसैले सचेत हुनुहोस । घरेलु काममा विदेश नगएको राम्रो ।
प्रश्न : म वैदेशिक रोजगारीबाट छुट्टीमा घर आएको छु । श्रम स्वीकृती सकिन अझै दुई महिना बाँकी छ । के अब फर्किदा मैले पुनः श्रम स्वीकृति लिनु पर्छ ? कि नगराई जान सकिन्छ ?
उत्तर : आसन जी, तपाईंको श्रम स्वीकृति अझै दुई महिना बाँकी भएकाले फर्केर जान त अप्ठेरो हुँदैन । तर दुई महिनापछि तपाईंको श्रम स्वीकृति स्वतः सकिन्छ । विदेशबाटै श्रम स्वीकृति लिन झञ्झटिलो प्रक्रिया गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसैले विदेश फर्कनअघि श्रमस्वीकृति लिएरै जानु बुद्धिमानी हुन्छ । श्रमस्वीकृति नभएको खण्डमा विदेशमा दुर्घटनामा पर्दा वा अरु सारोगारो पर्दा सरकार र नेपाली दूतावासले सहयोग गर्ने आधार पनि हुँदैन ।
राज लामा / नुवाकोट
प्रश्न : रोजगारीका लागि विदेश जाँदा सरकारले फ्रि भिसा फ्रि टिकट लागु गरे पनि म्यानपावरमा गएर बुझ्दा यस्तो भिसामा जाँदा राम्रो हुँदैन भन्छन । गयो भने कम्पनी टुट्छ वा कमाइ नै हुँदैन भन्छन् । गए विजोक मात्रै हुन्छ रे । पैसा धेरै तिरेर जाँदा काम र कमाई राम्रो हुन्छ भन्छन्, यो कुरा साँचो हो ?
उत्तर : राज जी, यो कुरा साँचो होइन । तपाईंलाई जस्तै अरुलाई पनि थोरै पैसा तिरेर जाँदा थोरै कमाई र नराम्रो काममा परिन्छ भनेर दलालले भन्ने गरेका छन् । धेरै पैसा तिर्दा राम्रो काम र कमाई हुन्छ भनेर लोभ देखाउँछन । तर वास्तविकता त्यस्तो होइन् । थोरै पैसा तिर्दा नराम्रो काम र थोरै कमाई हुने अनि, धेरै पैसा तिर्दा राम्रो काम र कमाई हुने भन्ने कुरै हुँदैन । सरकारले अहिले खाडीका ६ र मलेसिया गरी सात वटा देशमा फ्रि भिसा फ्रि टिकट लागु गरेको छ । त्यसैले कसैले भनेकै भर...
राजु श्रेष्ठ/ मोरङ
प्रश्न: मैले दुवई जान मेडिकल गरेको छु। मेडिकलमा छातीमा दाग देखिएको छ। यो चिसो र धुँवा धुलोका कारणले हो भनिएको छ। त्यो दाग तत्काल औषधी खाएर हटाउन सकिएला ? दाग हटेपछि म दुवई जान पाउँछु ? उता पुगेपछि फेरी यो समस्या देखियो भने के होला ?
उत्तर: सुरेश पौडेल, केन्द्रीय प्रतिनिधि, नेपाल स्वास्थ्य व्यवसायी महासंघ – राजु जी यसलाई दाग भन्दा पनि प्लुरल थिकेनिङ भनिन्छ। फोक्सोमा पानी जम्ने समस्या हो। यसको तपाईंले आफै पनि उपचार गर्दा राम्रो हुन्छ। चिसोबाट बच्ने, सुख्खा खानेकुरा नखाने, झोल भएको खानेकुरा खाने, पानी धेरै पिउने, धुँवा धुलोमा ननिस्कने, निस्कनै परे मास्क लगाउने। यसो गरे तपाईंको समस्या आफै हल हुन्छ। तपाईंलाई छिटै सञ्चो हुनु छ भने डाक्टरको सल्लाह अनुसार औषधि सेवन गर्न सक्नु हुन्छ। यहाँ मेडिकल जाँ...
प्रश्नः वैदेशिक रोजगारमा रहेको व्यक्तिको परिवारले क्यान्सर जस्तो रोग लागेमा नेपाल सरकारबाट के कस्ता सेवा सुबिधा पाउछन् ?
उत्तरः वैदेशिक रोजगार प्रबद्र्धन बोर्डबाट वैदेशिक रोजगारमा भएकाका परिवारलाई, क्यान्सर, मुटुरोग, पार्किनसन्स लगायतका रोग लागेमा रोगको प्रकृती र अवस्था हेरेर १५ देखि ५० हजार रुपैयाँसम्म उपचार खर्च पाइन्छ। तपाईंले वैदेशिक रोजगार प्रबद्र्धन बोर्डको कार्यलय पुरानो बानेश्वरमा गएर निवेदन दिन सक्नुहुन्छ।
धर्म भट्ट / भारत
प्रश्नः मेरो आँखा कमजोर छ। आँखा कमजोर भएको मान्छे विदेश जानको लागि मेडिकल अनफिट हुन्छ कि हुदैन? म -१.५ पावरको चस्मा लगाउछु।
उत्तरः धर्म जी, नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी महासंघका पूर्वअध्यक्ष एवं मेडिकल व्यवसायी प्रविण तिवारीका अनुसार सेक्युरिटी गार्ड, लेवर लगायतका काममा आँखा कमजोर भएकाहरु अनफिट हुन्छन्। त्यसैले आँखा कमजोर भएकाहरु यी काममा जान पाउँदैनन्। तर कम्प्युटर सम्बन्धी काम, उद्योग मजदुर, सेल्सबोइ / गर्लका रुपमा भने आँखा कमजोर भएपनि चश्मा लगाएर रोजगारीका लागि विदेश जान सक्छन्। अथवा, घरभित्रै बसेर गर्ने काममा दक्ष र अर्धदक्ष कामदार आँखा कमजोर भएपनि चश्मा लगाएर रोजगारीका लागि विदेश जान सक्छन्।
प्रश्नः मेरो एक आफन्त साउदी अरेबियामा सरसफाई कामदारमा क्रियाशील छिन्। करीब ३ महिना अघि उनलाई वैदेशिक रोजगारमा पठाउदा दलाल मार्फत ६० हजार रुपैयाँ म्यानपावरमा वुझाएको रसिद मसँग छ। फ्रि भिसा तथा टिकटको व्यवस्था हुँदाहुँदै भारी रकम लिएकोमा अव उक्त बुझाइएको रकम फिर्ता लिन सकिन्छ कि सकिंदैन ? यदि सकिन्छ भने प्रक्रिया के हुनसक्छ ?
उत्तरः अम्बर जी, पिपुल फोरममा आवद्ध अधिवक्ता मन्जु सुवेदीका अनुसार तपाईंसँग म्यानपावरलाई बुझाएको रसिद छ भने म्यानपावर विरुद्ध काठमाडौंको बुद्धनगरमा रहेको वैदेशिक रोजगार विभागमा रकम बुझाएको प्रमाणसहित उजुरी दिन सक्नुहुन्छ। त्यसका लागि तपाईंको आफन्तले फर्किएर उजुरी दिन पनि सक्नुहुन्छ। नभए प्रमाण पुर्‍याएर तपाईंको आफन्तको परिवारले पनि उजुरी दिन सक्छन्। प्रमाण पुगेमा वैदेशिक रोजगार विभागले छानविन गरी पैसा फिर्ता गरिदिन्छ।
वैकुण्ठ खकुरेल / युएई
प्रश्नः मेरो श्रम स्वीकृती सकिएको छ। त्यसैले नविकरण गर्न चाहन्छु। त्यसका लागि कहाँ सम्पर्क गर्नुपर्ला?
उत्तरः वैकुण्ठ जी, पुनःश्रमस्वीकृति वैदेशिक रोजगार विभाग काठमाडौं कार्यालय ताहाचल काठमाडौंमा मात्रै हुने व्यवस्था छ। त्यसैले नविकरणका लागि तपाईं काठमाडौं आउनै पर्छ। श्रम स्वीकृति नविकरण नगर्दा विदेशमा अप्ठेरो आइपर्दा सरकारले दिने क्षतिपूर्ति पाइन्न। त्यसैले छुट्टिमा आएका बेला पुनःश्रमस्वीकृति गराउनु होला।
गोविन्दप्रसाद न्यौपाने / मलेसिया
प्रश्नः मलेसियामा ३० महिनाअघि सडक दुर्घटनामा परेपछि उपचार गराइरहेको छु। १६ जुन २०१५ मा दुर्घटनामा परेँ। श्रम स्वीकृति १८ अगष्ट २०१८ मा र बीमा पनि उही मितिमा सकिन्छ। अब म नेपाल आउन अझै एक वर्ष लाग्छ होला। मैले वैदेशिक रोजगार विभाग र बीमाबाट पाउने क्षतिपूर्ति पाउन सक्छु कि सक्दिन् ? मेरो घाँटी भाँचिएको छ। टाउको र हात अलि अलि मात्र चल्छ।
उत्तरः गोविन्द जी, श्रम स्वीकृति गरेपछि सम्झौता अवधिमा नै दुर्घटनामा परेकाले तपाईंले क्षतिपूर्ति पाउनुहुन्छ। उपचार गराएको कागजात चाहिँ सुरक्षित राख्नुहोला। तपाईंलाई बीमा गरेको कम्पनी र वैदेशिक रोजगार प्रवद्र्धन बोर्डले क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउँछ।
हरि चौहान / मलेसिया
प्रश्नः म मलेसिया आएको ३ वर्ष भयो, मेरो समयावधि (कन्ट्रयाक) पनि सकियो अनि घर जान्छु भन्दा कम्पनीले १५०० रिंगेट माग्छ , यस्तोमा हाम्रो दूतावासले केही सहयोग गर्छ कि ?
उत्तरः हरी जी, तपाईंको समस्या हामीले प्रवासी नेपाली समन्वय समिति (पिएनसिसी)का महासचिव सोमप्रसाद लामिछानेसँग राखेका थियौं। उहाँका अनुसार, करार अवधि सकिएकाले तपाईं घर फर्कन पाउनुहुन्छ। कम्पनीले १५ सय रिंगिट मागेको कुरा चाहिँ गैर कानुनी हो । त्यसैले तपाईंले समस्या नेपाली दूतावासमा राख्नुभयो भने घर फर्कन सहयोग गर्छ। त्यससँगै तपाईंलाई प्रवासी नेपाली समन्वय समितिले पनि सहयोग गर्छ। मलेसियामै पिएनसिसीको सम्पर्क अधिकृत हुनुहुन्छ। उहाँको नाम रामचन्द्र नेपाल हो। तपाईंले ...
प्रश्नः आजाद भिसामा कतार पठाउछु भन्दै एउटा दलालले दुई लाख ३० हजार लिएको चार महिमा भयो। मलाई पेन्टरको तिन महिने भिसा प्रिन्ट गरेर दिएको छ। धेरै पैसा लागेको र गैर कानूनी काम जस्तो लागेर आजाद भिसामा जान्न भन्दा, भिसा रद्द गर्न पैसा लाग्छ भन्छ। अनि हवाइ टिकट नकाट म जादिन भन्दा नि टिकट काटेर मलाई त जानै पर्छ गइनस् भने तेरो पुरै पैसा डुब्छ भन्छ। म के गरुँ?
उत्तरः अरुण जि, पिपुल्स फोरममा आवद्ध अधिवक्ता कृष्णप्रसाद न्यौपानेका अनुसार, खाडीका देश र मलेसियामा रोजगारीका लागि जान सरकारले फ्रि भिसा फ्रि टिकटको व्यवस्था अनुसार दशहजार रुपैयाँ मात्रै तिर्नुपर्ने नियम बनाएको छ। त्यसअनुसार तपाईंले बढी पैसा बुझउनु भएको छ। यो गैरकानूनी हो। दोस्रो कुरा जान्न भन्दा भन्दै कसैलाई पनि जबरजस्ती काममा पठाउन पाइँदैन। त्यो गलत हो। आजाद भिसालाई कुनै पनि देशको सरकारले अनुमति दिँदैन्। विदेशमा यस्तो भिसामा जाँदा तपाईंको मेडिकल, इन्स्युरेन्स् ल...
प्रश्नः मैले पोल्याण्ड रोजगारीका लागि म्यानपावरमा अप्लाई गरेको थिए। भिसा आउन ६ महिना लाग्छ भनेको थीयो। मैले एक लाख रुपैयाँ र पासपोर्ट बुझाएको ८ महिना भइसक्दा नि भिसा आएन। अब एक लाख रुपैयाँ र पासपोर्ट फिर्ता पाउन मैलै के गर्नु पर्छ ?
उत्तरः जगदिश जी, पोल्याण्ड रोजगारीका लागि नेपाल सरकारले खुल्ला गरेको देश हो। नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका पूर्व महासचिव कमल तामाङका अनुसार, पोल्याण्डले कृषि र कुखुरा फार्ममा कामदार लैजान्छ। तपाईंले भरपर्दो म्यानपावरबाट पोल्याण्ड जाने प्रक्रिया गर्न सक्नुहुन्छ। पोल्याण्डका लागि भिसा नेपालबाट लाग्दैन। म्यानपावर व्यवसायीले भारतको दिल्लीमा रहेको पोल्याण्डको दूतावासबाट भिसा स्टाम्प लगाइदिन्छन्। पोल्याण्ड जानका लागि ८० हजार रुपैयाँसम्म तिर्न पर्छ। कानुन अनुसार तपाईंको प...
प्रश्नः मैले सुने अनुसार श्रम स्वीकृती नविकरण एयरपोर्टबाट पनि हुन्छ। के यो साचो हो ? कृपया वास्तविकता के हो बुझाईदिन अनुरोध गर्दछु।
उत्तरः सन्तोष जी, श्रमस्वीकृति नविकरण वैदेशिक रोजगार विभाग काठमाडौं कार्यालय ताहाचल काठमाडौंमा मात्रै हुने व्यवस्था छ। त्यसैले नविकरणका लागि तपाईं कार्यालयमा जानै पर्छ। श्रम स्वीकृति नविकरण नगर्दा विदेशमा अप्ठेरो आइपर्दा सरकारले दिने क्षतिपूर्ति पाइन्न। त्यसैले पुनःश्रमस्वीकृति गराउनु होला।
प्रश्नः म कतार गएको थिएँ। दुई महिनामा मेडिकल गर्दा अनफिट देखियो। म नेपाल फर्किदा ७५ दिन भैसकेको थियो। म्यानपावरमा कुरा गर्दा ६० दिनमा फर्किए मात्रै क्षतिपूर्ति पाइन्छ भन्छ। म के गरौ ?
उत्तरः बेनामे साथी, तपाईंको समस्या हामीले पिपुल्स फोरममा आवद्ध अधिबक्ता कृष्णप्रसाद न्यौपानेसँग राखेका थियौ। उहाँका अनुसार तपाईंको मेडिकल ६० दिन भित्र गरेको प्रमाण छ भने तपाईं ७५ दिनमा फर्किनुले फरक पर्दैन। तपाईं नेपाल फर्किएर मेडिकल गर्दा पनि अनफिट हुनुभयो भने मेडिकलबाट क्षतिपूर्ति पाउनुहुन्छ। तर तपाईं मेडिकलमा फिट हुनुभयो भने तपाईंलाई म्यानपावरले क्षतिपूर्ति दिनुपर्दैन। थप जानकारी र कानूनी सहयोगका लागि ९८४१४२२४७१ मा सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ।
मोहन बिक / सल्यान
प्रश्नः अहिले म स्नातक पहिलो वर्षमा बढ्दै छु। म विदेश जान चाहन्छु तर कुनै सीप छैन। मैले के गर्नु पर्ला ?
उत्तरः मोहन जी, सुरक्षित आप्रवासशन परियोजना सामीले मेसन (डकर्मी), सटरिङ्ग कार्पेन्टर (फर्मा लगाउने), इलेक्ट्रिसियन, स्काफोल्डिङ, गार्मेन्ट लगायतको निःशुल्क तालिम दिन्छ। तपाईंले तालिमका बारेमा थप बुझ्न ९८४१३६७९६९, ९८४०२४८०३४ र ९८४०२५५२८० मा फोन गरेर पनि जानकारी लिन सक्नुहुन्छ।
प्रश्न: वैदेशिक रोजगारको सिलसिलामा जति अवधीको करारमा गएको हुन्छ त्यो बिचमा कम्पनी बन्द भएर करार अवधि नसकी नेपाल फर्काएमा के कस्तो सहायता पाइन्छ यो सम्बन्धी के प्रावधान छ ?
उत्तरः अर्जुन जी, हामीले तपाईंको प्रश्न पिपुल्स फोरममा आवद्ध अधिवक्त कृष्णप्रसाद न्यौपानेसँग राखेका थियौं। उहाँका अनुसार, कम्पनी बन्द हुँदा यही सहायता पाइन्छ भन्ने कानुनी प्रवधान छैन। तर करार अवधिभर काम गर्न नपाउँदा कामदार मर्कामा पर्ने भएकाले करार अवधिभरीको तलब दावी गर्न पाइन्छ। र, क्षतिपूर्ति पनि पाइन्छ। पिपुल्स फोरमले तपाईंलाई निःशुल्क कानुनी सहायता दिन्छ। सहायता र थप जानकारीका लागि ९८४१४२२४७१मा सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ।
+977 1 5000171, 5000181
+977 1 5000171 5000181 ext. 148/ 167
+977 1 5000171 5000181 ext. 108
© Ujyaalo Multimedia Pvt. Ltd.- 2018